प्रधानमन्त्री कार्यालयको चिया !- विचार - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १४, २०७६ बिनु सुवेदी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारको पहिलो तला उक्लिँदा हरेक पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षतिर हेर्छु । थाहा छ, प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यावश्यक बैठकबाहेक सिंहदरबारको कार्यालयमा जानुहुन्न, ठ्याक्कै उसै गरी जसरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला जानुहुन्थेन ।
कोइराला र ओलीको अरू कुरा पनि मिल्छ, जस्तो कि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारभित्रै हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रम प्रधानमन्त्री निवासमै गरिन्छ, किनभने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यतिखेर कोइरालालाई झैं गरी बिमारले सताइरहन्छ । ओली र कोइरालाकै कुरा किन निकालेकी हुँ भने मैले राजनीतिक रिपोर्टिङ थाल्दा कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र अहिले ओली हुनुहुन्छ ।
तर प्रधानमन्त्रीज्यू, सिंहदरबार गए पनि नगए पनि मलाईचाहिँ तात्त्विक फरक पर्ने होइन, किनभने त्यहाँ गइरहने मैले उहाँ त्यहाँ भए नै पनि भेट्ने र बातचित गर्ने सम्भावना रहँदैनथ्यो । अझ पहिले–पहिले त त्यही भवनमा पनि छिर्ने काम त्यति धेरै हुँदैनथ्यो । किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी प्रेससँग ‘डिल’ गर्न तोक्नुभएका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालको कार्यकक्ष नै ऊर्जा मन्त्रालयको भुइँतलामा थियो, म प्राय: त्यतै गइरहन्थें । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारको कार्यकक्ष फेरिएको छ । म पनि हप्ताको कम्तीमा दुई दिन कडा सुरक्षा चेकजाँचसहित उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई भेट्न सिंहदरबार गइरहन्छु, गइरहन्थें नै भनूँ न अब त !
जे होस्, सोचहरू यस्तै छन्, यिनै सोचले संरचना बनाउने हुन्, जुन हामीले देखेका छौं नै । कुराकानीको बिट मार्दै त्यहाँ बसेका आधाभन्दा बढी पत्रकार निस्किए, हामीमध्ये केहीसँग प्रश्नहरू बाँकी नै थिए, हामी बस्यौं । जसै भरिभराउ कार्यकक्ष खुकुलो भयो, थापाजीको तीर मतिर सोझियो । ‘बिनुजी, तपाईं आइहाल्नुभयो, चिया खानुभयो, अब जानुस्,’ उहाँले जुन शैली र दम्भका साथ यो कुरा भन्नुभएको थियो, यहाँ शब्दमा लेख्दा मैले उहाँको त्यो दम्भ उतार्न असमर्थ भएँ, यहाँहरूले पढ्दा त्यो कुरा थापाजीकै शैलीमा पढिदिनुहोला । मैले उहाँसँग सोध्नुपर्ने केही कुरा रहेको बताएँ । तर उहाँले अरू पत्रकारको नामै किटेर भन्नुभयो, ‘तपाईं, तपाईं, तपाईं बस्नुस्, बिनुजीसँग मेरो काम छैन, तपाईं जानुस् ।’ त्यति भनेर उहाँ गोप्य कार्यकक्षमा अरू कोहीलाई भेट्न छिर्नुभयो । म त्यहाँबाट निस्किएँ । भित्र रहेका एक साथीले म्यासेज गरे, ‘उनको व्यवहारले हामीलाई पनि दु:ख लागेको छ । कतै बस्दै गर, हामी आइहाल्छौं ।’
मलाई उहाँले त्यस्तो व्यवहार किन गर्नुभयो, अहिले पनि मनमा सवाल उठिरहेको छ । हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको नेतृत्वको सरकार र पार्टीलाई चित्त नबुझ्ने समाचार लेखेकाले हो ? त्यसो हो भने त त्यहाँ त्यस्ता कुनै सञ्चारकर्मी थिएनन्, जो आबद्ध सञ्चार माध्यमले ओलीको प्रशंसा गरेको होस् । यदि त्यही नै हो र हाम्रा विषयवस्तुसँग चित्त बुझेको छैन भने पनि प्रेस सल्लाहकारले डिल गर्ने तरिका त्यो हो र ? म प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छु । उहाँहरूले त त्यस्तो हैकम कहिल्यै देखाउनुभएन । चिया नै खान नपाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको झैं व्यवहार त झेल्नुपरेको छैन । असन्तुष्टि विषयवस्तुमा पो पोखिन्छ, व्यक्तिमाथि त्यो हदको व्यवहार गर्न मिल्छ ?
चिया खान पाइन्छ भनेर उहाँलाई कहिल्यै भेटिएन र भेटिनेछैन पनि, तर एक कप चियाका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रेस सल्लाहकारको कार्यकक्षमा गएको झैं गरी जुन व्यवहार प्रदर्शित भयो, त्यसको अर्थ मैले कसरी लगाऊँ ? राज्यकै खर्चमा खाएको त्यो चियाको मूल्य मैले कसरी तिरूँ ? अहिलेलाई यति मात्रै भन्छु— म एक कप चियाका निम्ति एक चिम्टी आत्मसम्मान साट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेकी थिइनँ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७६ ०७:५७
सल्यानको त्रिवेणीका बूढापाका लोप हुँदै गएको सोरठी नाच्दै । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर